विशेष- Page2of 548 - Online Majdoor
चाखलाग्दो खेल: क्युब
लकडाउन सुरु हुने थाहा भएपछि यो लकडाउनमा के गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ । मेरो एउटा मिल्ने साथी अनुस्तुपलाई रुबिक्स क्युब सा¥है मनपथ्र्यो । उसले मलाई पनि रुबिक्स क्युब हल...
कृषिमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा पश्चिमा विकासको अवधारणा पसेपछि नेपाली जनजीवन र त्यसमा पनि गरिब किसानहरूको स्थिति कसरी खस्किँदै गयो र नेपाल आजको स्थितिमा आइपुग्यो भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित...
‘कालिदास भनेर कोकिल अरू काला भए तापनि ! कुज्दैछन् वनमा न अड्छ तिनको आफ्नो वसन्ति ध्वनि’ – महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि कालिदासको जीवनकालका विषयमा इतिहासकारहरूमा प्रशस्त मतभेद छ । विद्वानहरूले...
सोभियत सरकार विदेश पलायन नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो पुस्तकमै हामीले धेरै खर्च ग¥यौँ । खाने लाउनेमा भन्दा बढी हामीले पुस्तक पत्रिकामै धेरै पैसा खर्च ग¥यौँ । भालेन्टिना र मैले आफ्नो इन्स्टिच्युटबाट प्रतिमहिना...
कोरोना, सरकार र दसैँ
प्रेम के. निडर
टोलको कपडा सिलाइको काम गर्ने एकजना सूचीकार अँध्यारो मुख लाएर बसेका थिए । मैले सोधेँ, “दाइ, अँध्यारो मुख लाएर बस्नुभएको छ । लकडाउन खुलिसक्यो । अझै काम पाउनुभएको छैन ?” “कहाँ पाउनु...
प्रजग कोरियामा कृषक र मजदुरको लागि पनि कलेज
प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया सिङ्गो समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने अभियानमा छ । प्रजग कोरियाली सरकार र पार्टी मजदुर, किसानलगायत सबै श्रमिक जनतालाई बुद्धिजीवीकरण गर्नका लागि क्रियाशील छन् । सम्पूर्ण समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्ने लक्ष्यअनुरूप...
स्मार्टफोनमा लिप्त बालबच्चा मानसिक समस्याको जोखिममा
भक्तपुर, २४ असोज । एक अध्ययनअनुसार १० वर्षभन्दा ठूला ५० देखि ६० प्रतिशत बच्चाहरूले आफ्नो दिनको १५ देखि २५ प्रतिशत समय स्क्रिनको अगाडि बिताउने गरेका पाइन्छ । यस हिसाबले पहिलेको तुलनामा...
सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१ हजार नजिक शनिबारमात्रै ५ हजार ८ जना सङ्क्रमित थपिए
काठमाडौँ, २४ असोज । नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१ हजार नजिक पुगेको छ । शनिबारसम्म देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको ३० हजार ८१८ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले शनिबारको...
बुधबारबाट चालिसौं तःमुँज्या
४० औँ नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्या अनलाइनमा